Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Tunisia War Cusub » Tareenada ayaa Ku Dhaca Tunisia Waxay Ka Baxeen Dhaawac 30 ama Ka Badan
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • News • Safarka Tareenka • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Tunisia War Cusub
Laba tareen ayaa isku dhacay Tunisia maanta oo Khamiis ah, Oktoobar 7, 2021, waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 30 qof. Dadka dhaawacmay ayaa la geeyay 2 isbitaal oo ku dhow.
Shilka ayaa ka dhacay kaliya duleedka magaalada Tunis ee caasimadda Tunisia, gaar ahaan agagaarka Megrine Riadh ee Ben Arous.
Dhawr jeer oo hore ayaa shil tareen ka dhacay Tuuniisiya taas oo sababtay dhimasho iyo dhaawac.
Waxaa ugu darnaa sanadkii 2015 -kii markaas oo 19 qof ay dhinteen ku dhawaad ​​100 kalana ay dhaawacmeen kadib markii tareen uu isku dhacay gaari xamuul ah.
Shilka ayaa ka dhacay aagga Megrine Riadh ee Ben Arous, oo ka baxsan caasimadda Tunis. Waxaa jiray lacag caddaan ah oo tareen oo badan oo dalka ah sanadihii la soo dhaafay.
Bishii Disembar 28, 2016, waxaa shil galay tareen iyo bas uu maamulayay Gobolka Nabeul Shirkadda Gaadiidka Gobolka. Shilka ayaa ka dhacay Wadada 1 -aad ee Wadada Siidi Fathallah oo ah xaafad ku taal Djebel Jeelloud oo u dhow caasimada Tunis. 5 qof ayaa dhimatay ku dhawaad ​​52 qofna way ku dhaawacmeen shilkaas. Dadka dhintay, waxaa jiray 2 sarkaal oo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Tuunis, wakiil ka tirsan Guutada La-dagaalanka Argagixisada, iyo haweeney iyo dhallaanka.
Shil tareen 2015
Ka dib baaritaan ay samaysay Wasaaradda Gaadiidka ee Tuuniisiya, sababta tooska ah ee lagu sheegay isku -dhaca 2016 -ka ayaa ahaa xawaaraha xad -dhaafka ah ee darawalka baska iyo in aan la tixgelin qaylo -dhaan cod oo uu soo saaray tareenku. Si dadban, dib-u-dhaca dayactirka cilladaha tareenka iyo xannibaadda otomaatiga ah iyo sidoo kale wadashaqayn la'aanta mas'uuliyiinta ee ku saabsan baahida calaamadaha ku-meelgaarka ah iyo jiritaanka nabad-suge ee isgoyska ayaa sidoo kale lagu sheegay sababaha shilka.
Isku dhaca ugu dhimashada badnaa ayaa dhacay bishii June 2015 markaas oo 19 qof ay dhinteen 98 kalena ay dhaawacmeen. Shilka ayaa ka dhacay inta u dhaxeysa tareenka iyo gaari xamuul ah oo ku yaal El Fahs, Tunisia. Sababta ugu weyn ee shilkaas waxay ahayd iyada oo aan lahayn wax caqabad ah oo ka soo gudubta heerka.
24-kii Sebtembar, 2010, tareenka Bir el-Bey ayaa isku dhacay tareen kale oo ka yimid Sfax-ka Tuunisiya taas oo sababtay in uu ka leexdo oo uu rogrogo ka dib markii uu tareenkii kale ku dhuftay baabuurka dabada ee xarunta tareenka. Shilkaas ayaa sababay hal dhimasho 57 kalena waa ay dhaawacmeen. Sababta shilku waxay ahayd aragti -xumo oo ka dhalatay roobab xoog leh.
Baaritaan ayaa waxaa bilaabaya Shirkadda Tareennada Qaranka ee Tuunis si loo ogaado duruufaha ku xeeran shilka maanta iyo sidii loo heli lahaa kuwa mas'uulka ka ah.